Sehatra anisany nalaza ho be kolikoly indrindra ny Fitsarana. Tafiditra ao anatin’izany ny tontolon’ny fandraharahana ny fonja. 30 juin 2020
Tamin’ny tatitra nifandimby navoakan’ireo mpanao fanadihadiana momba ny tahan’ny kolikoly eto Madagasikara dia saika ao anatin’ny lisitra hatrany ny Fitsarana.
Efa misy ny ezaka atao hanafoanana izany, hoy ny Minisitry ny Fitsarana, ary izany ezaka izany dia miainga indrindra ihany koa amin’ny fandraisan’andraikitry ny olom-pirenena.
Na dia maro aza izy ireo dia vitsy tao anatin’ny zava-misy ary izay ezaka nahatonga azy ireo nihena izay no fampirisihana ataoko amintsika rehetra fa nisy ny ezaka hatao hiadiana amin’ny kolikoly ary miezaka manatsara indray ny asa sahanina ny Fitsarana”, izay raha fintinina ny fanehoan-kevitra noentin’ny Minisitry ny Fitsarana.
Amin’ny maha tompon’andraikitra voalohany ny tenany eo anivon’ny Fitsarana dia mampirisika an’ireo mpitsara sy ireo mpandraharahan’ny fonja ny tenany mba hanao ny asa am-pahamendrehana. Tanjona, hoy izy, ny hamerina indray ny fahatokisan’ny vahoaka ny Fitsarana. Nohamafisiny anefa fa tsy adidin’ireo mpitsara irery ihany fa miainga amin’ny olom-pirenena tsirairay, ary adidin’ny vahoaka iray manontolo ny ady atao amin’ny kolikoly. Miainga amin’ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay ny hahafoana tanteraka ny kolikoly eny anivon’ny Fitsarana.